Isivumelwano seNkcazo kwigrama: Inkcazo kunye nemizekelo
Yintoni Isivumelwano SesiXeko?
Ngesi-grammar yesiNgesi, isivumelwano sesivumelwano sisetyenziselwa isivumelwano (okanye isivumelwano ) sesenzi kunye nezifundo zabo kunye nezivakalisi ngezibizo zabo ezichaseneyo ngokubhekiselele kwintsingiselo kunokuba ifomu yegrama. Yaziwa nangokuthi yi synesis . (Eminye imiqathango yesivumelwano esivumelwaneni sesibambiso iquka isivumelwano somgaqo-semvumelwano, isivumelwano sesi-semantic, isivumelwane sentengiso yesivumelwano, isivumelwano esivakalayo , kunye nesakhiwo sokwakha .)
Ezinye iziganeko eziqhelekileyo zesivumelwano somthetho zibandakanya (1) izibizo ezihlangeneyo (umzekelo, "intsapho"); (2) iinxalenye ezininzi zobuninzi ("iminyaka emihlanu"); (3) izibizo ezininzi ("United States"); kunye (4) nezinye iiyunithi ezihlanganisiweyo kunye kunye ("indawo yokulala kunye nesidlo sasekuseni").
Ukuxubusha kwesivumelwano kunye nezibizo ezihlangeneyo (kwisiNgesi saseMerika naseBrithani IsiNgesi), bona isiNgesi saseMerika .
"Ndiyazi ukuba uRhulumente wethu uvumela imikhosi yethu phantsi, ixesha elikhulu."
(UJacqui Janes kuNkulumbuso uGordon Brown, ocatshulwe nguFilip Webster, "Umoya weGordon Brown onokuzikhusela." I-Times [UK], uNks. 10, 2009)
"Ngokuchanekileyo, sikrokrela ukuba inkqubo ixakile, urhulumente wethu ube yimali-mali kwaye siye saxhaswa."
(Wendell Potter kunye noNick Penniman, isizwe esiThabathayo . IBloomsbury Press [US], 2016)
"Akukho namnye kubo enkundleni ukuva ukuba abagwebi baxhasa isikhalazo sabo."
(USteven Erlanger, "Ukukholelwa Kwezoyikoliso Kugqitywa eFransi." I-New York Times , ngoFebruwari 24, 2009)
"U-Eric owaziwayo, uMichael Palin noTerry Jones banikezela ubungqina enkundleni kanti amanye amalungu ahlalayo, uGilliam noJohn Cleese, abanike ubungqina obubhaliweyo. Akukho namnye kubo owayenkundleni ukuva isigwebo."
(Haroon Siddique, "uMvelisi waseMyy Python Umvelisi Wamafilimu Ulwaphulo Lweqela Elijongene Neqela Lokwabelana." I-Guardian [UK], Julayi 5, 2013)
"Ngaphezulu kolwandle olusezantsi lweNgilani, abaqhubi beBournemouth banomdla njengabo baseConwall, kodwa banenkinga enkulu enkulu: unxweme luba nempembelelo enobulunga kakhulu. Kodwa iBhunga laseBournemouth ibhunga alizange lilungele ukuvumela ukuba oku kubenqande ukukhuthaza abakhweli , kunye neengxowa zabo, ukutyelela. "
(Alf Alderson, "Ngaba i-Wave Perfect for Surfing Betificial - naseBournemouth?" I-Guardian [UK], uNksz 9, 2009)
"Kodwa wonke umntu unako ukuphumelela, uyazi; kwaye wonke umntu unelungelo lokwenza oko akuthandayo ngemali."
(U-Isabella Thorpe e- Northanger Abbey nguJane Austen, 1817)
IsiVumelwano seNkcazo kunye neNinzi zeNguqulelo zeNinzi kunye neNguqu eziBambeneyo
Izibheno ezininzi ezifana neendaba , ithetha , kunye nezopolitiko sele zithatha izenzi zantoni; ngoko xa isibizo esicatshulwa njengento enye sisenza isenzi esisodwa, isivumelwano sesivumelwano sisebenza emsebenzini kwaye akukho bani [i- United States ithumela i-ambassador] Xa igama lesiqhelo lisetyenziselwa njengegama eliqokelelweyo kwaye lithatha isenzi esiningi okanye isigidimi esiphezulu, sinesivumelwano esivumelwaneni [ ikomiti idibana ngoLwesibili] [ iqela lifuna ukuvakalisa izimvo zabo ]. isivumelwano sesivumelwano kunye nokuthabatha ukuthatha izenzi zodwa kodwa izibhengezo ezininzi [ wonke umntu kufuneka ukuba abonise ukuchonga kwawo]. "
Incwadi kaMerriam-Webster yabalobi nabaHleli , i-Merriam-Webster, 1998)
Isivumelwaniso seNkcazo kunye ne "Inyaniso" Iinkcazo
"Iimoto ezininzi ezindleleni zithetha izingozi ezininzi zezithuthi." Emva kwesibinzana sibonakaliso siba nomxholo oyedwa ochaza ukhetho lwe - ifomu yesenzi. Imferensi yenziwa kwimeko yeemeko, kwaye intsingiselo yesigcaziso esinyanisiweyo sinokuthi ifakwe ngeprafrase 'Inyaniso yokuba kukho / ngaba X.' Ininzi 'inyaniso' ibonakala ngokuqhelekileyo kwizivakalisi apho umcebisi ufunyanwa ngentsingiselo (okanye izenzi ezinxulumene nazo zibandakanya, zibandakanya, zibandakanya ), kodwa siyazifumana kwizivakalisi kunye nezinye izenzi: " Iindleko eziphezulu zokuvelisa zivimbela umsebenzisi (I-Carl Bache, i- Essential of Mastering yesiNgesi: i-Grammar Grisey .) UWalter de Gruyter, 2000)
Isivumelwane sesivumelwano kunye ne "Plus"
"Xa izibalo zeemathematika zibizwa ngokuthi izivakalisi zesiNgesi, isenzi sisoloko sisesigxina: Iimbini ezimbini kunye (okanye zilinganayo ). kunye nemimozulu embi eyenziwe kwimakethi ebuthakathaka . Lo mbono uye wabangela abanye ukuba bathi kwezi zivakalisi, kunye nemisebenzi njengengcaciso ebhaliweyo 'ngaphezu koku.' ... Kunengqiqo ukujonga okunye kule misebenzi njengesiqhagamshelo esihlangene nezifundo ezibini kwiqela elilodwa elifuna isenzi esinye ngesivumelwano somyalelo . "
( Amagama Amakhulu Amalunga Phantse Wonke umntu odibanisa kunye nokusebenzisa kakubi i- Houghton, 2004)
Isivumelwano soMxholo kunye neenkcazo ezinjenge "Oyedwa kwiSithandathu" kunye "Omnye kwi-10"
"Iimpawu zolu hlobo zimele ziphathwe njengeninzi." Izizathu ezifanelekileyo zegrama kunye nezizathu ezifanelekileyo zolu xwebhu: Thelekisa 'ngaphezulu kweyodwa kwisiJapane esithandathu ingama-65 okanye ngaphezulu. 'ngaphezulu kweyodwa kwiiJapane ezithandathu zineminyaka engama-65 okanye ngaphezulu.
"IsiGramatic, asinakuthethi ngegama " enye "kodwa igama elithi " inesithandathu, "libonakalisa iqela labantu. Ngokucacileyo, ibinzana limelela inxalenye - njenge '17% 'okanye' enye yesithandathu, 'zombini ezithatha izenzi ezininzi.' Kwabini kwezi-sixhenxe 'kunye' ezintathu kwi-10 'zithatha ezininzi, zisebenza ngokufanayo. "
(David Marsh no-Amelia Hodsdon, i- Guardian Style , i-3rd ed. I-Guardian Books, 2010)
Inkcazo kunye neMimiselo yamaColon (iMatriki yoPhuculo)
I-synopsis (ukwakheka kunye negrama)
Inkcazo kunye neMimiselo yeXesha elilula kwiNgesi
Ukuqonda izivakalisi zezifundo
Yiyiphi i-Acronym? Inkcazo kunye nemizekelo
Ziziphi izinto ezixotshiwe, ezixutywe, okanye eziCatshulwa nguMculo?
Ubundlobongela kwiimfuno zeMidiya eziya kuLawula
Ukufaka iMask kwi-Microsoft Access 2013
Imbali yoLuntu kwiGrike lasendulo
Saint Andrew, umpostile
UApollo noDaphne, nguTomas Bulfinch
Izibalo zeeNyuvesi zeDuke zeDyuji
Isikhokelo kwiNkqubo ye-MYP
"Indlu yeDololi" Isifundo soBuntu: uTorvald Helmer
Izinto ezintlanu azifanele zenze xa Uhamba ngeSithuthuthu
Imifanekiso evela kwiNguqulelo yesiFrentshi
Udliwano-ndlebe: UReese Witherspoon Uthetha Nge 'Hamba Umgca'
Kutheni AbaMantyi Abagulayo Ekudleni eMilkweed?
IRoma yasekuqaleni kunye neNdaba yamaKumkani
Sazibona uJohan F. Kennedy ekuqaleni kwee-1990s
Iintlobo zeeNcwadi zabantwana ngo-2013
Ukuhlaziywa komqhubi weCleveland Launcher TL310
Ukutshintsha isantyambo kwisihlunu sakho sokubhukuda
Izipho zobuhedeni kuThixo